7773033.ru | Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, #ShepherdsHut – # - 7773033.ru
Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, #ShepherdsHut – #
ဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူ Holmes ကနေနယူးဂီတဗီဒီယို!
အပေါ် Posted5အောက်တိုဘာလ, 2018 အားဖြင့် 7773033.ru
ယနေ့တွင်သူတို့ Holmes အတွက်ရိုက်ကူးဂီတဗီဒီယိုဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူသစ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းဖြန့်ချိ.
ဂျက်စီကာ Falk နဲ့သမီးကျောက် Duet New York မှာရေဒီယိုစခန်းများအပေါ်ပြီးသားကစား, Nashville, ဖလော်ရီဒါ, Denver, မီချီဂန်နှင့်နယူးဇီလန်. သူတို့ကအစယခုတစ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းသတင်းစကားများနှင့်သီချင်း၏သမိုင်းနှင့်အတူအမေရိကန်မာနမဂ္ဂဇင်းအတွက်ထင်ရှားလျက်, ပါပြီ6မီချီဂန်နဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်အရင်ဖျော်ဖြေ. ကျောက်လည်းမှာ Barna န်ကြီးဌာနအတွက်စနေနေ့တွင်သည်ထင်ရှား. 11.00 ကိုယ့် P4, ထို့အပြင်တစ်ဦးကပြောင်းလဲမှု Make သီချင်းအကြောင်းကိုအဲဒီမှာစကားပြောရန်သည်အဘယ်မှာရှိ. ယနေ့တွင်ဂျက်စီကာ Holmes အတွက်တစ်ခုတည်းရိုက်ချက်လည်းပါစေ. Jessika နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောဆိုင်ကယ်ဂီတဗီဒီယိုထဲရှိ Holmes လမ်းများသည်အထိ hums ဘယ်လိုကြည့်ရှုပါ.
Spotify မှဂီတ Link ကို:
ဂီတဗီဒီယို – ပျံသန်းဖို့အဆင်သင့်:
Posted in, သတင်း	| တစ်ဦးပြန်ကြားချက် Leave
တနင်္ဂနွေမှာ 14: Ljustorps IF – Holmes SK ကို. 16 စက်တင်ဘာလ 2018
အပေါ် Posted 16 စက်တင်ဘာလ, 2018 အားဖြင့် 7773033.ru
နေ့တိုက်ရိုက်၏ပွဲစဉ်! သငျသညျအောက်ခြေညာဘက်ဂီယာ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အမှု၌, အစား HSK ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကြိုးစားကြ .
Holmes Ljustorps IP ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ယနေ့တွင်. သုံးမှတ်စားပွဲပေါ်မှာ၏ထိပ်မှပေါ်တံခါးကျင်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့!
Tabelläget * ဂိမ်းမတိုင်မီ:
စားပှဲ 2018-09-16 ဂိမ်းမတိုင်မီ
*Matfors IF 2, p.g.a တိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ. ကလပ် div အထက်နှစ်သင်းရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ကြောင့်စည်းမျဉ်းများ 5.
MV 1. 2. 3. 4.5. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 18.ဒံယလေသ Selin 19. 21.Claudio Moraga
Holmes SK ကို – Selånger FK. Holmes Vallen Sat. 22 စက်တင်ဘာ kl 14,00.
Hassels IF – Holmes SK ကို. Hasselbackens IP ကို ​​Sun က 30 စက်တင်ဘာ kl 14,00
lineup, ပွဲစဉ်ကြေငြာခြင်းနှင့်ရလဒ်အသီးအသီးပွဲစဉ်အတွက်စာသား, ဤနေရာတွင်အခမဲ့!
အပေါ် Posted 10 စက်တင်ဘာလ, 2018 အားဖြင့် 7773033.ru
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကပ္ပတိန် Niklas Wikholm နောက်မှစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အဖွဲ့သည်လက်ရှိဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရာသီလုပ်နေကြောင်းပြောပါတယ်. - ဒါဟာအသင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့သူ့ဟာသူသည်ထက်ရပ်ရွာပိုဆိုလိုတယ်, Wikholm ပြောပါတယ်. သတင်းဖော်ပြမှု & ရုပ်ပုံ: ဂျနီဖာ Engstrom, Sara Carlzén. ST.nu
Ange လျှင်တနင်္ဂနွေ Holmes Vallen လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါတီဗီကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူအစုအဝေးတစ်ဦးကိုမှန်ကန်målkalasမှကုသခဲ့ကြသည်. ဒိုင်လူကြီးနောက်ဆုံးပီပီမှုတ်ခြင်းမပြုမီမိနစ်မှတ်ချက်ချတစ်ခုလုံးကိုကိုးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်.
တပ်မ5matches're အစဉ်အဆက်အသကျရှငျ ကျိန်အပ်သော HSK ထောက်ခံသူများအတွက်, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရွေးချယ်ခဲ့သော Holmes Vallen Sundsvall Tidning တက်ရောက်ခဲ့သည် . ဂိမ်းမီ, သတင်းစာယခုအပတ်အစောပိုင်းကလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအသင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Holmes အားကစားကလပ်ရဲ့အသစ်ဝါသနာအိုးပတေရုသ Lind အင်တာဗျူး. ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးနောက် အဖွဲ့ကပ္ပတိန် Niklas Wikholm နှင့်အတူ (ထိုသိုး).
ဂိမ်းမတိုင်မီ Holmes ရဲ့သင်တန်းဆရာမိုက်ကယ် Kotermajer နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး
Holmes ယခုရာသီအများအပြားထူးဆန်းပစ်မှတ်အမြတ်အစွန်းအလွန်နှောင်းပိုင်းတွင်ဂိမ်းဆုံးဖြတ်ချက်များတက်စီတန်းထားပါတယ်. နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါ Ange အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေ့တွင်အိမ်ကနေ IF နှင့်ဝမ် 1-2 အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်ခဲ့သည် (အာဏာရ ). တနင်္ဂနွေရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်သက်သေပြမှာမဟုတ်ဘူး…
ယခုပင်လျှင်အလွန်ပထမဦးဆုံးမိနစ်၌, ထိုးစစ်ပြစ်ဒဏ်ချ Olle Nordberg ဖြိုဖျက်နှင့် Holmes ဟာပင်နယ်တီမှတဆင့်ဦးဆောင်သို့သွားနိုင်ခြင်း. Ange ထို့နောက်ပထမနှစ်ဝက်အတွက်ခိုင်မာသောကာကွယ်ရေးတက်ပြ Holmes အန္တရာယ်အခြေအနေများသို့ရတဲ့တစ်ခက်အချိန်ရှိခဲ့. အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုမိနစ် 27 တစ်လျှော့ချမှတဆင့်ရိုက်ထည့်နိုင်ဘူး “ihopspark” Holmes ရဲ့အသစ်ဂိုးသမားကိုရှိမုနျ Moline အခွင့်အလမ်းထွက်ခွာသောပြစ်ဒဏ်ဧရိယာထဲမှာ. Ange တစ်ဖန်မသေချာသောကာကွယ်ရေးအတွက်အိမ်အဖွဲ့ပြီးနောက်သွင်းယူမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တက်နောက်တော်သို့လိုက်နဲ့ဘောလုံးကိုရှင်းလင်းရန် manage မလုပ်ခဲ့. Holmes ပစ်မှတ် bargain Olle Nordberg သို့သော်ရုံတစ်ဝက်အချိန်မတိုင်မီအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဂိမ်းဖွင့်လှစ်လုံးဝကျယ်ပြန့်ဒုတိယနှစ်ဝက်မတိုင်မီခံစားခဲ့ရ.
ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်အိမ်အဖွဲ့သည်ပြိုင်ဘက်အပေါ်ကိုအနည်းငယ်ဂိမ်းအားသာချက်တက်ပြသ. အဆိုပါဧည့်သည်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ခဲသို့သွားသောအခါ Holmes ကစားသမားများ၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းမှားမရနိုင်ခြင်း… သို့သော် Holmes စုဆောင်းရန်စီမံခန့်ခွဲ, Ange-ခုခံကာကွယ်ဆီသို့ဦးတည်အများအပြားဆိုထားပါသည်ရှည်လျားဘောလုံးကိုရုတ်သိမ်းရေး, အဆိုပါ scoresheet နှင့်ချိတ်. အဆိုပါ 87'e မိနစ်မှာတော့ရမှတ်သူခိုး Johan Smott နှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာ Holmes ဗဟိုစက်ဝိုင်းအကြားအခမဲ့ကန်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ညွှန်ပြအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်တစ်ကျော့ပြန်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် Holmes ကိုအစားထိုး. ယခုအချိန်တွင် Johan “ခန်းမ” Hallström Johan Smott Ange ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆိပ်ကမ်းများပတ်ပတ်လည်အခမဲ့ကန်များအတွက်အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်, ဤသို့လုံးဝမလိုအပ်တဲ့ရှေ့တွင်ဂိုးသမားညွှန်ပြ. ခန်းမအဆိုပါvälvuxne Olle Nordberg ၏ဦးခေါင်းခွံကိုရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ယခုထငျရှား Johan Smott ၏ခြေရင်းမှာချခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ်တစ်ဦး nifty shutdown ကိုလုံးဝဘောလုံးကိုကျော်လောင်းနှင့် equalizer ကိုတိုက်တွန်း 4-4 !
အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုမိနစ် 92 Holmes အောင်ပွဲ၏တကယ့်ရနံ့ခံစားရရန်စတင်နေပြီ… ကျွန်တော်အခြားနှောင်းပိုင်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစား-အနိုင်ရတဲ့အတွက်အောင်မြင်ဖို့သင့်တယ်?? ဘေးကကြားပေါက်ဖို့ field ရဲ့ထိုးစစ်ဝက်အတွင်းမြင့်မားတဲ့အခမဲ့ကန် Holmes များအတွက်ဒိုင်လူကြီးရိုက်. အခမဲ့ Kick ဘုရင်ကဆရာယောဟနျ “ခန်းမ” သူကညင်သာစွာနောက်ပြီးမြက်ခင်းပေါ်ဘောလုံးကိုတက် Tee မတိုင်မီHallströmသည်သူ၏လက်ဝဲလက်နှင့်အနည်းငယ်ချောင်မြက်ပင်ဝှေ့နေတယ်… အိမ်အဖွဲ့သည်တစ်ဦးအာဏာရဘို့အားလုံးရရှိနိုင်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုတက်ရွေ့လျားနေကြသည်…
Hall တိုတောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းယူနဲ့တခါထပ်နောက်ဆုံးမှာ Holmes နောက်ခံလူ Kristan Karlsson ၏ခြေရင်းမှ၎င်း၏လမ်းတွေ့ရှိရာပင်နယ်တီဧရိယာသို့လက်ဝဲ Dojan နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံဓာတ်လှေကားစေသည် – တကယ့်တိုက်ပွဲများစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူအမျှကစားပွဲ-အနိုင်ရ-ရည်မှန်းချက်, ဂိမ်းတွန်းအားပေးရန်စီမံ! နစ်ခ် Borgen “ဒါဟာအတွက် slides” Holmes Vallen ၏ပဲ့တင်သံတွေ… ရာသီ၌ကျန်ကြွင်းသာသုံးဂိမ်းနဲ့အတူကျနော်တို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါ * Medelpad ပဉ္စမတန်း၏အလွန်အထွတ်အထိပ်မှာဆဲ!
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒဏ်ရာအချိန်အတွက်အဆုံးအဖြတ် 5-4 ရည်မှန်းချက်ကိုကြည့်ပါ: ﻿
*Matfors IF 2, table ထဲမှာဒုတိယမုသာစကားကို, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကလပ် div အထက်နှစ်သင်းရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ကြောင့်စည်းမျဉ်းများတိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ 5.
Holmes SK ကို – Ange IF
1-0 Johan Hallström (ပြစ်ဒဏ်)
2-2 Olle Nordberg. မြည်းသည်: Johan SMOTTENE
2-3 Omid တာဂှီ
3-3 Niklas Wikholm. မြည်းသည်: Johan SMOTTENE
3-4 အလက်ဇန်းဒါး Thid
4-4 Johan SMOTTENE. မြည်းသည်: Olle Nordberg.
5-4 Kristian Karlsson. မြည်းသည်: Johan Hallström (အပေါ်ကဆက်ပြောသည်)
အဖြစ် 30 pers
Ljustorps IF – Holmes SK ကို. Ljustorps IP ကို ​​Sun က 16 စက်တင်ဘာ kl 14,00.
Holmes အားကစားကလပ်ရဲ့အသစ်ဝါသနာအိုးပတေရုသ Lind ယနေ့ Sundsvall Tidning အတွက်မှတ်ချက်ပြု
အပေါ် Posted 8 စက်တင်ဘာလ, 2018 အားဖြင့် 7773033.ru
ပတေရုသ Lind IF ပြိုင်ဘက် Indals ထံမှ Holmes SK ကိုဆီသို့ရောက် လာ. ,, ဒါပေမယ့်ကလပ်၏မစ်ရှင်အပေါ်ယူပြီးကျော်တှနျ့ဆုဘယ်တော့မှ. သတင်းဖော်ပြမှု & ရုပ်ပုံ: လောနိတျမွို့ Sahlin, ဂျနီဖာ Engstrom, ST.nu
“Åslinညီအစ်ကိုတွေရဲ့ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက် - သူ Holmes ရဲ့အသစ်ဝါသနာအိုးခဲ့သည်: “ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မဆိုအသင်းရှိခဲ့ဘူး
Ånge IF Holmes Vallen ဆန့်ကျင်မနက်ဖြန်ရဲ့ပွဲစဉ်၏ ST.nu တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်, မှာ kickoff 14.00.